खोप लगाएका विराटनगरका चिकित्सकमा सामान्य साइड इफेक्ट
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्यखोप लगाएका विराटनगरका चिकित्सकमा सामान्य साइड इफेक्ट
हल्का ज्वरोदेखि सामान्य दुखाइ महसुस
विराटनगर/नेपालका १४ माघदेखि कोभिड खोप लगाउन सुरु गरिएको हो ।
भारतले सहयोगमा दिएको १० लाख मात्रा कोभिशिल्ड स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लगाएर पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो । नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको कोभिशिल्डले खोप लगाएका धेरैजसोमा साइड इफेक्ट देखापरिरहेको छ । कुनै पनि खोप लिएपछि हल्का प्रकारका साइड इफेक्ट देखिनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
खोप लगाएका अधिकांशमा साइड इफेक्ट हल्का वा मध्यम हुन्छन्, जुन दुईदेखि तीन दिनसम्म रहन्छ र सजिलै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । खोप लगाएपछि देखिने साइड इफेक्टहरू प्रतिरोधात्मक प्रणालीको सङ्केत हुन् । विराटनगरका खोप लगाएका चिकित्सकमा पनि सामान्य ज्वरो आउने, काँप्ने, खोप लगाएको ठाउँमा पीडा हुने, चक्कर लाग्ने, वाकवाकी हुने, थकान, कमजोरी महसुस हुनेलगायत समस्या देखिएको छ ।
केही समयमात्रै सामान्य असर देखिएकाले उनीहरू सबै आ–आफ्नो नियमित काममा फर्किसकेका छन् ।
कोसी अस्पताल, विराटनगरका रेडियोलोजिस्ट आशुमान श्रेष्ठले खोप अभियानको पहिलो दिन १४ माघमा खोप लगाएका हुन् । खोप लगाएपछि केही असर नभए पनि १२ घण्टापछि खोपको साइड इफेक्ट देखिन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उनलाई बिहान १०१ डिग्री ज्वरोसहित, काँप्ने तथा केही कमजोरी महसुस भएको थियो । तर, खोप लगाएको २४ घण्टापछि साइड इफेक्ट हराएर सामान्य अवस्थामा फर्किएको उनले बताए ।
‘यो मनोवैज्ञानिक हो वा होइन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘खोप लगाएपछि कोभिडको महामारीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर सकारात्मक सोचाइको विकास भने अवश्य भएको छ ।’ खोप लगाएको छु भनेर केही ढुक्क भए पनि कोभिडबाट सुरक्षित हुन हालसम्म अपनाइरहेको सावधानीका उपाय अपनाउन भने जारी नै राखिरहेको उनको भनाइ छ ।
कोसी अस्पतालमै कार्यरत स्त्रीरोग तथा प्रसूती विशेषज्ञ जीवन धमला आफूलाई खोप लगाएपछि केही साइड इफेक्ट नभएको बताउँछन् । ‘मलाई इन्जेक्सन हानेको ठाउँमा सामान्य दुखाइमात्र भयो,’ उनले भने, ‘दुखाइबाहेक मलाई अन्य केही पनि समस्या देखिएको छैन ।’ खोप लगाएपछि आफू केही सुरक्षित भएको महसुस गरेको उनको भनाइ छ । सबैले खोप लगाएपछि मात्र कोभिडको महामारीलाई अन्त्य गर्न सकिने हुँदा नडराई कोभिडविरुद्धको खोप लिन उनले सुझाएका छन् ।
हालसम्म विराटनगरको कोभिड सेन्टरमा दुई हजारभन्दा बढीलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिइसकेको छ । र, तीमध्ये धेरैजसोलाई सामान्य प्रकारको साइड इफेक्ट देखिएको छ भने कसैमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छैन ।
१७ माघमा खोप लगाएका विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर सञ्जीव यादवलाई पनि खोप लगाएपछि केही फरक प्रकारको साइड इफेक्ट देखिएको छ । खोप लगाएको केही समयपछि आफूलाई टाउको दुखाइ, थकान, शरीरमा दुखाइ, कमजोरी महसुस भएको उनको भनाइ छ । खोप लगाएपछि दुखाइका साथसाथै ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि भएको उनले बताए । खोप लगाएको अनुभव आफ्नो सुनाउँदै उनले महामारीलाई अन्त्य गर्नका लागि सबैलाई खोप लगाउन सुझाव दिएका छन् ।
विराटनगरस्थित रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालका आँखा विशेषज्ञ भास्कर झालाई पनि कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि केही पनि गम्भीर प्रकारको साइड इफेक्ट नदेखिएको बताएका छन् । खोप लगाएको ठाउँमा सामान्य दुखाइ भएको थियो, उनले भने, ‘तीनदेखि चार दिनमा उक्त ठाउँमा भएको दुखाइ पनि हराइसकेको छ ।
अस्पतालका अन्य स्टाफलाई समेत खोप लगाउन प्रोत्सान गरेका डा. झाले सबैलाई खोप लगाउन सुझाव दिएका छन् । अस्पतालमा झन्दै ५० जनाले खोप लगाएकामध्ये केहीलाई ज्वरो, सामान्य शरीरमा दुखाइ भएको जस्ता इफेक्ट देखिएको थियो । महामारी अन्त्य गर्नका लागि खोप लगाउन आवश्यक रहेको हुँदा उनले सबैलाई खोप लगाउन सुझाब दिँदै आएका छन् ।
खोप अभियानको पहिलो दिन प्रदेश एकमा पहिलो पटक विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालका सिनियर फिजिसियन दीपक सिग्देलले खोप लगाएका थिए । खोपका बारेमा भएको डर हटाउनका लागि आफैँ अगाडि सरेर खोप लगाएका डा. सिग्देललाई खोप लगाएपछि केही पनि साइड इफेक्ट नभएको उनको भनाइ छ । ‘खोप लगाएपछि इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा सामान्य दुखाइ भयो,’ उनले भने, ‘दुखाइ पनि २४ घण्टापछि हराएर गयो ।’ दुखाइबाहेक आफूलाई केही पनि अन्य समस्या नभएको उनले बताए ।
उनका अनुसार खोप लगाएपछि सामान्य ज्वरो आउने (कसैमा छोटो समयका लागि अत्याधिक ज्वरो आउने), काँपेको जस्तो महसुस हुने, शरीर गलेको महसुस हुने (मायलजिया), थकान, शरीरमा दुखाइ, वाकवाकी लाग्नेजस्ता साइड इफेक्ट देखिन सक्छ जुन केही समय वा दिनमा हराएर जान्छ । जिब्रो वा शरीर दुखाइका लागि सामान्य प्यारासिटामोलको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हालसम्म विराटनगरको कोभिड सेन्टरमा दुई हजारभन्दा बढीलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिइसकेको छ । र, तीमध्ये धेरैजसोलाई सामान्य प्रकारको साइड इफेक्ट देखिएको छ भने कसैमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छैन । उनका अनुसार खोप लगाउनेबित्तिकै भन्दा पनि घर गइसकेपछि साइड इफेक्ट हुने गरेको पाइएको छ । खोप लगाएपछि केही गम्भीर साइड इफेक्ट देखिन सक्छ कि भनेर पाँच जना डाक्टरको टोलीलाई सेन्टरमा राखिएको छ । तर, हालसम्म कसैमा पनि गम्भीर समस्या नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
कोभिडविरुद्धको खोप लगाउँदामात्र नभएर अन्य खोप लगाएपछि पनि केही न केही साइड इफेक्ट देखिने हुन्छ । त्यसकारण खोप लगाउन उनले सबैलाई सुझाएका छन् ।